ရုရှားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Alexei Navalny
ရုရှားအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် Alexei Navalny အဆိပ်ခတ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ သောကြာနေ့မှာ NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေ အရေးပေါ်အစည်းဝေး ထိုင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့ နောက်မှာ ရုရှားဟာ ဓါတုလက်နက် အသုံးပြုမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ OPCW ရဲ့ ကြီးကြပ်မှု အောက်မှာ လွှတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အပြည့်အဝ. ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း NATO အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဘယ်ဓါတု လက်နက်မျိုးကိုပဲ သုံးသုံး ဒါဟာ လူ့အသက်ကို လုံးဝလေးစားမှု မရှိရာ ရောက်သလို ဒါဟာ နိုင်ငံတကာ လိုက်နာရမယ့် စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေကို ချိုးဖေါက်တဲ့ လက်မခံနိုင်စရာ လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း NATO အတွင်းရေးမှုးချုပ် Jens Stoltenberg က Brussels က အစည်းအဝေး အပြီးမှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
ရုရှားအနေနဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေခွန်းထုတ်တာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသလို အဖြေပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း NATO အဖွဲ့ဝင်တွေက သဘောတူကြတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဂျာမဏီဆေးရုံမှာ အကုသခံနေရတဲ့ ရုရှားအတိုက်အခံ Navalny ဟာ အသုံးမပြုဖို့ တားမြစ်ထားတဲ့ ရုရှားထုတ် စစ်တပ်သုံး အာရုံကြောထိခိုက်စေတဲ့ Novichok အဆိပ် မိခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို ဂျာမဏီ ဝန်ကြီးချုပ် Angela Merkel က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကြေညာခဲ့တာပါ။
အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် Navalny အဆိပ်ခတ်ခံရမှုမှာ နောက်ကွယ်က ရုရှးအစိုးရ ပါနေတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေအတွက် မဟုတ်မှန်ကြောင်း ရုရှားအစိုးရက ငြင်းဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက် ခိုင်မာတဲ့ အချက်လက် တွေ မရှိဘူးလို့ သောကြာနေ့မှာပဲ ရုရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Vladimir Kolokoltsev က ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ရုရှားအတိုကျအခံခေါငျးဆောငျ အဆိပျခတျခံရတဲ့ကိစ်စ နတေိုးအဖှဲ့ အရေးပျေါဆှေးနှေး
ရုရှားအတိုကျအခံ ခေါငျးဆောငျ Alexei Navalny အဆိပျခတျခံရတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆှေးနှေးဖို့ သောကွာနမှေ့ာ NATO မဟာမိတျအဖှဲ့ဝငျတှေ အရေးပျေါအစညျးဝေး ထိုငျခဲ့ကွပွီးတဲ့ နောကျမှာ ရုရှားဟာ ဓါတုလကျနကျ အသုံးပွုမှု တားဆီးကာကှယျရေးအဖှဲ့ OPCW ရဲ့ ကွီးကွပျမှု အောကျမှာ လှတျလပျတဲ့ စုံစမျးစဈဆေးမှုကို အပွညျ့အဝ. ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ရမှာ ဖွဈကွောငျး NATO အဖှဲ့က ပွောပါတယျ။
ဘယျဓါတု လကျနကျမြိုးကိုပဲ သုံးသုံး ဒါဟာ လူ့အသကျကို လုံးဝလေးစားမှု မရှိရာ ရောကျသလို ဒါဟာ နိုငျငံတကာ လိုကျနာရမယျ့ စံသတျမှတျခကျြနဲ့ စညျးမဉျြးဥပဒကေို ခြိုးဖေါကျတဲ့ လကျမခံနိုငျစရာ လုပျရပျဖွဈကွောငျး NATO အတှငျးရေးမှုးခြုပျ Jens Stoltenberg က Brussels က အစညျးအဝေး အပွီးမှာ သတငျးထောကျတှကေို ပွောပါတယျ။
ရုရှားအနနေဲ့ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး မခှေနျးထုတျတာတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရဖို့ရှိသလို အဖွပေေးရမှာ ဖွဈကွောငျး NATO အဖှဲ့ဝငျတှကေ သဘောတူကွတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
ဂြာမဏီဆေးရုံမှာ အကုသခံနရေတဲ့ ရုရှားအတိုကျအခံ Navalny ဟာ အသုံးမပွုဖို့ တားမွဈထားတဲ့ ရုရှားထုတျ စဈတပျသုံး အာရုံကွောထိခိုကျစတေဲ့ Novichok အဆိပျ မိခဲ့တာ ဖွဈကွောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ခကျြကို ဂြာမဏီ ဝနျကွီးခြုပျ Angela Merkel က ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ကွညောခဲ့တာပါ။
အတိုကျအခံ ခေါငျးဆောငျ Navalny အဆိပျခတျခံရမှုမှာ နောကျကှယျက ရုရှးအစိုးရ ပါနတေယျ ဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြတှအေတှကျ မဟုတျမှနျကွောငျး ရုရှားအစိုးရက ငွငျးဆိုထားတာ ဖွဈပါတယျ။ဒီကိစ်စကို စုံစမျးစဈဆေးဖို့အတှကျ ခိုငျမာတဲ့ အခကျြလကျ တှေ မရှိဘူးလို့ သောကွာနမှေ့ာပဲ ရုရှားပွညျထဲရေးဝနျကွီး Vladimir Kolokoltsev က ပွောကွားခဲ့တာပါ။